China Polymer UHMWPE Tsvimbo Bhar Ramu Kubvisa Machine Dia 25mm-80mm Mugadziri uye Mutengesi | SuKo
Polymer UHMWPE Tsvimbo Bhar Ramu Kubvisa Machine Dia 25mm-80mm
1. Hunhu hwePTFE, UHMWPE, Ram Rod Extruder PFB20
Kuburikidza nekuenderera mberi nekuvandudzwa, iyo michina yakapusa, yakatsiga uye inoshanda.
Iyo midziyo inodzorwa ne PLC system, uye inoshandiswa otomatiki nekuita kuri nyore.
Nekugadzirwa kwakasiyana siyana, iyo michina inogona kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevashandisi, uye zvigadziriswe vatengi.
Iyo midziyo inomhanya yakamira kwenguva yakareba, iine ruzha rwezasi. Uye inoderedza mutengo nekuchengetedza simba uye simba panguva yekumanikidza kugadzirisa.
Midziyo uye kuumbwa kunoitwa nehunyanzvi tekinoroji, ngura kuramba, yakasimba uye nehupenyu hwakareba hwehupenyu.
Dhizaini dhizaini iri nyore uye inotora nzvimbo diki.
Zvigadzirwa zvakawedzeredzwa zvine mashandiro epamusoro maererano nehuremu uye kusimba kwesimba.
Yakashongedzerwa ne otomatiki yekudyisa sisitimu, ichizadza bhaketi re50-80 kg, otomatiki yekudyisa sisitimu inogona kuvimbisa 4-8 maawa ekushanda uye chengetedza mari yebasa kusvika padanho rakakura.
PTFE gondohwe tsvimbo extruder inogona kuenderera kusunda tsvimbo uye tsvimbo inogona kutemwa maererano nezvinodiwa.
Ipa yakakwana yeforoma system, iyo inosanganisira yakazara seti inoenderana nenhumbi, kudziyisa uye sintering system, kutonhora system, tembiricha controller, bracket, nezvimwe.
Iyo yakamira tsvimbo extruder extrude kubva kumusoro kusvika pasi. Iyo midziyo inogona kuiswa padhoro repiri kana chikuva.
2.Midziyo Inoshanda Nharaunda Zvinodikanwa
Pasi pesaiti panodikanwa kuti ive nhanho, uye saiti mutoro hausi pasi peyekuda zvinodiwa.
Iyo yekushandisa chikuva inoda yakachena nzvimbo yekudzora guruva ingress. Zvakanakisa kuve nemidziyo yekufefetedza mumusangano kuitira kufefetedza mweya.
Industrial power standard 380V 50Hz 3P, voltage inogona kugadziridzwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.
Iyo fekitori inogadzirirwa nemagetsi ekugovera makabati, yakamanikidzwa mweya uye zvimwe zvinotsigira michina.
Iyo midziyo inoda kuve yakagadzirirwa neiri kutonhora sisitimu. Matangi maviri / matangi emvura anogona kushandiswa nepombi inotonhorera kudzokorora zviwanikwa zvemvura.
Iko tembiricha yekamuri yemuti haifanire kunge inopfuura 28 ° C.
Iyo yakatwasuka extrusion michina inodhonza kubva kumusoro kusvika pasi. Iyo michina yakaiswa papuratifomu kana pasi ine nzvimbo yekukwirira ingangoita 2.8 metres. Iyo inoshanda daro munzira yehurefu hwechigadzirwa inoda kutariswa, uye hurefu hwakakwana hunofanirwa kuve hwakavimbiswa pasi peyakagadziriswa denderedzwa gomba remuchina kuti riite zvinodikanwa zvehurefu hwetambo yakabviswa yePTFE.
Horizontal extrusion michina inoda kufunga nezvedanho rinoshanda munzira yakatwasuka yemidziyo, uye zvinodikanwa kuti uone kureba kweiyo PTFE tsvimbo. Iyo midziyo inosanganisira yeforoma kureba kwemamita 4-7 (kusanganisa hurefu hwetsvimbo yakapedzwa yakapera), hupamhi hwemamita 1.2, kukwirira kwemamita 1.8.
3. Equipment Paramende
Muchina Muenzaniso PFLB20 PFB80 PFB150
Maitiro Vertical Kuwedzera Horizontal Kuwedzera
Simba KW (Magetsi Magetsi) 14 24 33
Tsvimbo Range Dia (mm) 4-20 25-80 80-150 (200)
Yakawedzerwa Tsvimbo Kureba Enderera kuburitsa nehurefu husingagumi
Mutungamiriri PLC + Bata Screen PLC + Bata Screen PLC + Bata Screen
Kubuda (Kg / h) 7+ 8+ 10+
Kushandiswa Kwemagetsi (KW / h) 2+ 2.5+ 3+
Kupisa nzvimbo 3-5 4-8 8-12
Machine Kurema (Kg) 930 960 1220
Kureba Kwemuchina (mm) 2150 1800 1900
Machine Floor nzvimbo (m2 ) 3.5 7 10
Muforoma The Foroma saizi iri customized maererano mutengi nokurondedzerwa. Iyo yakazara muforoma seti inosanganisira yeforoma muviri, extrusion musoro, yekubatanidza flange, seti yakazara yeepamusoro-tembiricha yekudziya mhete, seti yakazara ye sensors, inotonhorera yemvura bhachi system, uye yepamusoro-tembiricha yekubatanidza tambo, chakuvhe uye chigadzirwa rutsigiro. Kupera kwepamusoro kwakanyatso kurapwa kuti kuve kwakatsetseka, kusimba, uye kuita ngura. Ukobvu hwekuputira donje hunopfuura 5mm, uye iyo kudziya ukobvu inopfuura 10mm.
4. Midziyo Kuisirwa uye Mould Kuisa Dhayagiramu
5. Zvishandiso Uye Kugadzirwa kweforoma
Nguva dzose tarisa kukwirira, hutsanana uye tembiricha yemafuta emagetsi.
Inokurudzirwa kutsiva iwo hydraulic mafuta mwedzi mitanhatu yega yega.
Kudzorerwa zvisimbiso zvakasakara nenguva.
Iyo furuji inofanirwa kucheneswa nekuchengetwa munguva, uye pamusoro panofanira kuvezwa nechetete hwemafuta ekudzivirira.
Nekuchenjera bata iyo tembiricha sensor yeiyo inopisa coil, uye chengeta zvakanaka.
6. Zvishongedzo Uye Spare Zvikamu Tsananguro
Iyo michina inoumbwa nemainini muchina, hydraulic chiteshi, yekudzora kabhineti, otomatiki feeder, varidzi, kudziyisa matanda, mafuru uye zvimwe zvinhu. Zvishandiso zvinodiwa zvishongedzo zvinotumirwa kune vatengi vane zvishandiso.
Rondedzero yezvakakodzera zvishongedzo zvemidziyo inotumirwa kune mushandisi nemidziyo.
Kana mushandisi atenga zvigadzirwa zvekambani yedu, pamusoro pezvinodiwa, tinopa zvidimbu zvekushandisa kumushandisi kutsiva nekugadzirisa michina. Spare zvikamu zvikamu zvakajairika uye zvinogona kutengwa mumusika wemuno.
Nekuda kwehunyanzvi hwesainzi yemidziyo, vatengi vanogona kuenda kufekitori kunodzidza nezve kuisirwa, kutumwa, kushanda, shanduko yeforoma, kugadzirisa, kutungamira kwenhungamiro yemahara usati wasununguka
Kana iwe usingakwanise kuuya kukambani yedu kuzodzidza nekuda kwekukanganisa senge chinhambwe, vashandi, nguva, tinogona kuronga kuti mainjiniya vauye kuzotungamira kuisirwa, kutumira, kushanda, kutsiva chakuvhuvhu, kugadzirisa, uye maitiro ekutungamira echishandiso chiri pasi chibvumirano cheimwe bato.
Tinogona zvakare kuitisa kure kure kutungamira. Vashandisi vanogona kusarudza dzimwe nzira dzakadai sefoni, vhidhiyo, email, nezvimwewo kuti vadzidze nezvekuiswa kwemidziyo, kutumirwa, kushanda, shanduko yevhu, kugadzirisa, kutungamira kwenhungamiro, nezvimwe zvemidziyo.
8. Mushure mekutengesa Sevhisi
Kubva pazuva rekugamuchira muchina, iyo garandi nguva yezvose zvishandiso zvemuchina igore rimwe. Isu tinopa yemahara yekuchengetedza nhungamiro sevhisi panguva yewarandi nguva.
Kana paine chero dambudziko nechero izvo kunze kweiyo waranti nguva, ndapota taura nesu nenguva yekutsanangura dambudziko, uye isu tinopa yekutevera-resolution mukati maawa makumi maviri nemana.
Kana tiine muparidzi wemuno, tinokwanisa kubata muparidzi wemuno kuti tishande pamwe chete.
Yese mibvunzo nezve iyo michina inogona kubvunzwa kwatiri netsamba, vhidhiyo, runhare, nezvimwe.
Sevhisi Foni: + 86-0519-83999079
9.PTFE Tsvimbo Line otomatiki Kudya Zvishandiso
Bvisa otomatiki kudyisa, kusanganisira yakamanikidzwa mweya inodzosera kufuridza system, tanga kudyisa sisitimu, geza hosipaipi, yekukweva pfuti, vharuvhu jenareta, pcb controller, nzira 30-300 kg / h, dhayamita 150mm uye kukwirira 600mm, seta otomatiki yekudyara nguva uye inoburitsa nguva, hupfu kuyerera kunodzora, zvese zvinogadzirwa nesimbi isina chinhu, kutonga kwakangwara. Iyo yekuvhengana dhiramu iri 600mm dhayamita uye 700mm pakureba, ine 2.2kw yekudzikisa mota, inomhanyisa kumhanya kwe15-25 kutendeuka / min, 8-10mm gobvu repazasi ndiro, uye yekudyisa inokwana 75-90kg.
SKVQC-10 Yekugadzirisa Chinyorwa:
Zita Aihwa. Brand / Mugadziri
Vacuum jenareta 1pcs China
316L Stainless simbi Sefa 4pcs China
Vacuum hopper (304 simbi isina chinhu) 1set Suko
Yakadzvanywa mweya inodzosera kufuridza system Backflush vharafu 1set Nyuzirendi
Pneumatic chinhu AirTAC
Mhepo inoburitsa system 1set China
Kudzora system PC bhodhi 1set Suko
Kuchinja magetsi 1pcs China
Solenoid vharafu 1pcs AirTAC
Suction hosipaipi (Φ25) chikafu-giredhi simbi waya yakasimbiswa hose 3M Jerimani
Stainless simbi yekuyamwa kamwene (Φ25) 1pcs L 350mm
Stainless simbi dhiramu 1pcs OD600mm; H700mm
Gear mota 1pcs 1.5KW 15-20r / m
Muenzaniso Yakadzvanywa mweya yekushandisa Kumanikidzwa kwemhepo
12. Zvinoenderana Nezvokuda Zvokushandisa
Zita Tsananguro Pfupi
PTFE upfu pre-sintering vira Sintering PTFE simba
PTFE misa block crusher Pwanya bundu musimba
Electric nesefa upfu muchina Kusunungura hupfu usati wasanganisa
Zvishandiswezve zvinhu kupwanya kugadzirwa mutsetse Dicer, muchina wekuwacha, crusher
Powder Chisanganiso / Poda & Anobatsira Muvhenganisi Kusanganisa hupfu nemafuta emvura
Hydraulic bar yekucheka muchina Cheka mahombe makuru matanda sezvaanodiwa
Ndokumbira kuti utibvunze isu kune zvimwe PTFE zvigadzirwa zvekugadzirisa.
Zvadaro: Extruder otomatiki Mashini polymer PTFE Tsvimbo Ram PFB150 Dia 80mm-150mm
Na cameron :
Nguva dzose mafaro kubata navo, mitengo yakanaka
Na Rick :
Na Ralph :
Haikwanise kurova mutengo, zvakare kutumira inishuwarenzi chinhu chakanaka!
Dzvanya apa kukanzura mhinduro.
Nyora wongororo pano:
Yako Email *
Nyeredzi nyeredzi *
Wako Wongororo *